Wararka - Goorma ayaad isticmaashaa irbad lagu tallaalayo halkii aad ka isticmaali lahayd loop?
Waa in aad isticmaashid irbad lagu tallaalayo marka aad smear ka samaynayso warbaahinta adag sababtoo ah cufnaanta adag.Meelaha yaryar waa cufan, markaa way fududahay in la soo saaro muunadahan iyadoo la isticmaalayo irbad tallaal ah.Maxaad u isticmaashaa irbad halkii aad ka isticmaali lahayd wareegga tallaalka?
Sidee loo isticmaalaa irbadda inoculum ee dhaqanka?
Inoculum-ka waxaa caadi ahaan lagu tallaalaa dhaqamada maraq, dhaqamada aan fiicneyn, dhaqamada saxanka, iyo dhaqamada mindida.Irbadda tallaalka ayaa loo isticmaalaa tallaalida dhaqanka maraq aan nadiif ahayn.Daboolidda dhammaadka furan ee maraqku waxay ilaalinaysaa inay nadiif noqoto.
Sidee bay irbadda tallaalka uga shaqeysaa saxanadda petri?
Irbaddan tallaalka ah waxay leedahay caag caag ah oo leh loop silig nichrome si ay bakteeriyada uga gudbiso dhaqanka una gudbiso saxanka petri.Jeermi wareegga u dhexeeya wareejinta adigoo isticmaalaya olol oo kululeeya wareegga ilaa uu ka dhalaalayo.U oggolow wareegga inuu qaboojiyo ka hor inta aanad gelin dhaqanka bakteeriyada haddii kale kuleylku wuxuu dili doonaa bakteeriyada la wareejinayo.